गुट गिरोहमा बदलिएपछि कांग्रेस बिग्रिएको... :: शोभा शर्मा :: Setopati
गुट गिरोहमा बदलिएपछि कांग्रेस बिग्रिएको हो: शेखर कोइराला
शोभा शर्मा काठमाडौं, असोज २१
नेपाली कांग्रेस अहिले विधानलाई संघीयता अनुकूल बनाउन लागिरहेको छ। विधान संशोधन गर्न बनेको समितिले विकल्पसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा बुझाइसकेको छ। पार्टीभित्र विभिन्न विकल्पहरूमा बहस चल्दैछ। यही सेरोफेरोमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग सेतोपाटीकी शोभा शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
आउँदो महाधिवेशनमा तपाईं सभापति लड्ने हो?
(हाँसो) यो कस्तो छ, भने म जिल्ला घुम्दै छु। साथीभाइहरू भेट्दै छु। सिनियरहरूसँग कुरा गर्दै छु। त्यसपछि के निष्कर्ष निस्कन्छ अनि निर्णय हुन्छ। अहिले योबारे बोल्ने बेला भएको छैन।
कोइराला परिवारभित्र निरन्तर छलफल भैरहेको देखिन्छ। शशांक कोइरालाले पनि सभापति उठ्ने कुरा गर्नुभएको छ? तपाईं दुईमध्ये को उठ्ने हो?
सुजाता, शशांक मेरो पनि कुरा भैरहेकै छ। एकै दिनमा मिल्ने, निर्णयमा पुग्ने कुरा होइन।
कांग्रेसमा लागिसकेपछि सबैलाई इच्छा त हुन्छ कांग्रेसको सर्वोच्च तहमा पुगौं। कांग्रेसलाई राम्रो बनाऔं। मलाई पनि छ। शशांकलाई नि छ। रामचन्द्रजीलाई पनि छ। शेरबहादुर, सिटौलाजी, सुजाता सबैलाई छ। मेरो नेतृत्वमा कांग्रेस राम्रो बनाउँछु भन्ने चाहना स्वभाविक हो।
हामी सबैसँग छलफल र कुराकानीमै छौं। तर मुख्य कुरा के हो भने, कांग्रेसलाई अहिलेसम्म बचाएको हामी नेताले होइन कार्यकर्ता/तल्लो तहका कांग्रेसजनले हो। तिनीहरूको भावना के छ, विचार के छ बुझ्दै छु, अनि निर्णयमा पुग्छु।
तपाईं आजकाल गाउँ-शहर धेरै घुमिरहनुभएको देखिन्छ। कांग्रेस नेतृत्व सम्हाल्नेबारे कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
राम्रो देख्छु। तर पनि मेराअघि भन्नु एउटा कुरा हो। नेपालीहरूको बानी हुन्छ नि मान्छेको अघि नराम्रो किन भन्दिने भन्ने। त्यसैले कार्यकर्ताले मलाई बनेको कुरा ‘भेरिफाइ’ गर्नु पर्ने हुन्छ। सिनियर साथीहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। यूवाहरूसँग पनि कुराकानी र सरसल्लाह गर्दैछु। त्यसपछि, एउटा निचोडमा पुग्ने हो। अलि समय लाग्छ।
तपाईंसँग अहिले खासै टिम देखिन्न। टिममा को-को हुन्छन्?
अहिले त्यसरी सोच्या छैन। बनाउँछौं। पछि त बनिहाल्छ। अहिले नेतृत्व तहमा रहेको एउटा ग्रुप छ। त्यसपछि अर्को ग्रुप छ। त्यसपछी हामीहरू हौं। त्यसपछि तल अर्को समूह छ। ती सबैलाई मिलाएर हामीले हिँड्न सक्नुपर्छ। कांग्रेस भनेकै त्यही हो। यूवा पुस्तालाई छोडिदियौं, उनीहरूलाई साथ लिएनौं भने हुँदैन। उनीहरूलाई साथै लिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। विश्वकै राजनीति हेर्नुभयो भने यूवाहरू अगाडि आइरहेका छन्। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरूरी छ भने- नेतृत्वमा म पुगौं वा अर्को कोही हामीहरूका लागि त्यो अन्तिम पटक हुनेछ। त्यसपछि हामीले यूवा पुस्तालाई नेतृत्व छोड्दै जानुपर्छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको गुट त बलियो देखिन्छ। त्यसबाहेक रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, सिटौला समूह छ। यो सबैका बीचमा तपाईंले कसरी मिलाएर लानुहुन्छ? शशांक कोइरालासँगै कुरा सकिएको छैन?
एउटा कुरा के बुझ्नुपर्‍यो भने- कोइरालाहरूले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने होइन।
तर कोइरालाहरूको दाबी त छ नि ? लिगेसी पनि छ, होइन?
लिगेसी त छ। शशांक विपीको छोरा, सुजाता गिरिजाप्रसादकी छोरी। कोइरालाभित्रको लिगेसी हेर्‍यो भने त म धेरै तल पर्छू। सबभन्दा त मैले मिहिनेत गर्नुपर्‍यो।
तर ममात्र होइन कोही पनि नेतृत्वको हकदार हुन सक्छ। जसले नेतृत्व खोजेको हो उसले कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ। यसपालिको महाअधिवेशन कांग्रेसको लागि एउटा नयाँ आयाम दिने खालको हुनेछ। नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ जाँगर दिनेछ। यूवा र हामीजस्ताहरूको प्रतिनिधित्व भएर अगाडि बढ्छ।
केही दिनअघि देउवाइतर नेताहरूको भेला थियो रे। त्यहाँ के कुरा भयो?
त्यो भेलामा पनि पार्टीको आगामी नेतृत्वको कुरा त उठेको थियो। सभापतिमा को उठ्ने भन्नेबारे हामीले अहिले नै कुरा नगरौं, हामीमध्ये नै एकजना उठ्न पर्छ भन्ने कुरा भयो। खासमा नेपाल विद्यार्थी संघबारे कुरा गर्न हामी भेला भएका थियौं। नेविसंघको महाधिवेशन आउँदै छ। त्यसका लागि विजय गच्छदारजीको समूहलाई एकजना महामन्त्रीसहित १५ सदस्य दिइएछ। रामचन्द्रजीहरूसँग कुरा नगरी गच्छदारजीहरूको टिमलाई ल्याइयो भन्ने रहेछ। त्यो कुरा मलाई पनि थाहा थिएन। यसरी शेरबहादुरजीहरूले गर्दै जाने हो भने राम्रो हुँदैन भनेर भन्यौं। गच्छदारजीको फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा मर्ज गरेको हो। उहाँलाई स-सम्मान हामीले लिनुपर्छ त्यसमा कुनै शंका छैन। तर सभापतिज्यूको तजबिजीमा हुनुभएन, यसरी पार्टी चल्दैन भनेको हो।
तपाईंले अघिल्लो वर्षको आमचुनावदेखि नै कांग्रेसको शीघ्र महाधिवेशन हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। सभापतिले चार वर्ष सकिएपछि पनि एक वर्ष महाधिवेशन सार्न पाउनुहुन्छ नि होइन ?
मैले त महासमिति पनि अझ चाँडै हुनुपर्छ भनेको हो। उहाँहरूले सार्दैसार्दै मंसिर ४ गतेसम्म पुर्‍याउनुभएको छ। त्यो त पक्कै होला भन्ने विश्वास राख्छु किनभने पार्टीको विधान संशोधन को कुरा छ। शीघ्र महाधिवेशन त मैले भन्दै आएको छु। त्यस्तो होला भन्ने त म देख्दिनँ। तर समयमै भने हुनुपर्छ। एक वर्ष तीनचार महिना बाँकी छ। २०७६ फागुनमा महाधिवेशन हुनैपर्छ, नत्र नेतृत्वलाई त घाटा हुन्छ हुन्छ। कांग्रेसलाई पनि झन् घाटा हुन्छ।
हामीले समयमा केही गर्न नसक्ने। उता देश भने संघीय संरचनामा गैसक्यो। हामी चुनावमा कमजोर देखिएका छौं। अब पनि हामीले पार्टीलाई अधिवेशनमार्फत् उर्जाशील बनाउन सकेनौं भने के हुन्छ?
देउवाको विधान संशोधनमार्फत् सभापतिलाई बलियो बनाउने, मनोनयनबाट आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने र अर्को पटक पनि सभापति उठ्ने मन छ भन्ने सुनिन्छ?
विधान संशोधन भएपछि अहिलेबाट होइन अर्को महाधिवेशनबाट लागु हुन्छ। अहिले लागु गर्ने भन्ने कुरा हामी स्वीकार्दैनौं।
उहाँहरू निरंकुश बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मनोनित गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने भनेर। अहिले गच्छदारजीको पार्टी मर्ज गर्ने कुरा ल्याउनुभएको छ। त्यो छुट्टै कुरा हो। गच्छदारजीलाई देखाएर गलत काम गर्न पाइन्न।
विधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ। कांग्रेसको विधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ?
विधानमा कुनै पनि निरंकुशता झल्किनुभएन। सभापति होस् वा तल्लो तहको होस्। यसपालिको संसदीय चुनावमा जिल्ला सभापतिलाई भएको अधिकार पनि केन्द्रले लियो। त्यो गलत हो। जिल्लाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाको अध्यक्ष र मेयरका लागि पठाएको एकल नाम पनि काटेर केन्द्रले अर्को पठायो। केन्द्रले त्यहाँको मान्छे चिन्छ?
हाम्रो पार्टीमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिस्टम छ। अनुशासनको राम्रो व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो। अर्को शक्तिको बाँडफाँट हुनुपर्‍यो केन्द्रदेखि वडासम्म। पुरस्कार दिने र दण्ड दिने अधिकारै छैन, कसरी काम गर्छ उसले?
विधान संशोधनको प्रस्ताव र सुझावको ठूलो डकुमेन्ट छ। मैले पढेर सकेको छैन।
तिन/चारवटा कुरा हेर्दा यो विधानले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजेको हो प्रश्न जन्मिन्छ।
केन्द्रीय सभापतिदेखि तल्लो तहसम्मले अधिवेशन ‘फेस’ गर्नैपर्छ। वडा तहबाटै हामी चुनावबाट आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
अहिलेसम्म एकैचोटि केन्द्रीय सदस्य लड्ने चलन छ। अब त्यसरी हुँदैन तलैदेखि लड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कोही पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आउनैपर्छ।
आरक्षणको पनि कुरा छ। महिला दलित, आदिवासी मधेसीको आरक्षणमा संविधानमा जे छ, त्यसलाई हामीले आधार मान्नु पर्‍यो। तर एकपटकका लागिमात्र। अहिले तपाईंले हेर्नुहोस, कांग्रेका जति पनि आरक्षित सिट छन्- जातीय आरक्षण वा लैंगिक आरक्षण त्यहाँ एउटै अनुहारलाई तीन पटक सम्म देख्नुहुन्छ। त्यो गलत हो। आरक्षणमा त अर्को मानिसलाई अवसर दिनुपर्‍यो नि। जो पछाडि परेका छन् तिनीहरूलाई दिने हो। आरक्षणमा आएका पनि खारिएका मान्छे हुनुहुन्छ। एकपटक आइहाल्नुभयो। अब त लड्नुपर्‍यो। हार, जीत स्वीकार्नु पर्‍यो। तर आरक्षणमा आउन भएन। जस्तो ६ जना महिला सधैँ आए भने नयाँ महिला नेतृत्व कसरी तयार गर्ने?
सभापतिलाई अझै शक्ति चाहियो भन्ने छ। कांग्रेसको जन्महुँदा राणा शासनको बिगबिगी थियो। राणाहरूसँग लड्नुपर्ने थियो। त्यो बेला निरङ्कुश सभापति चाहिन्थ्यो होला। तर अब खुला समाज भैसक्यो। अहिले सभापति भनेको केन्द्रीय समितिमा बराबरमध्ये पहिलो हो। सबै बराबर हुन् तर सभापति तीमध्ये पहिलो हो। आजको विधानमा पनि सभापतिलाई शक्ति दिइएको छ। योभन्दा धेरै शक्ति दिइयो भने उ झन् निरङ्कुश भएर जान्छ। सभापतिलाई मनोनित गर्ने अधिकार धेरै दिन थाल्नुभयो भने पार्टीमा जुन गुटको विभाजन छ नि, त्यो रहिरहन्छ। त्यसैले सबै पदाधिकारीहरू निर्वाचनबाट आउनुपर्‍यो।
निर्वाचनबाट आएकालाई मानिस राखेर म पार्टी चलाउन सक्दिँन कसैले भन्छ भने त्यो सभापति सक्षम होइन। नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यमध्येबाट निर्वाचन जितेर आएको महामन्त्री र सभापति मिलेर काम गर्दैनन् भने दोष कसको हुन्छ? सभापतिको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्‍यो, मानिसहरुलाई बुझाउनु पर्‍यो।
सबै किसिमको निरङ्कुशताको अन्त्य गर्न खोज्ने कांग्रेस आफ्नो पार्टीभित्र निरङ्कुशताको वकालत कसरी गर्न सक्छ? नेपाली कांग्रेसको सभापति त आफै शक्तिशाली हुन्छ! सभापतिलाई मनोनित गर्ने अधिकार धेरै दिने व्यवस्था ल्याइयो भने त्यसले विकृति, विसंगति र विभाजनको रेखा झन् कोरिन्छ।
संसदीय समिति र अनुशासन समिति पनि निर्वाचनबाटै हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
मैले त के सुनिरहेको छु भने, अनुशासन समितिमा एकचोटी केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्तिलाई पनि राख्ने रे। त्यस्तो पनि मिल्छ? एक/दुई होइन तीन/चार पटक केन्द्रीय सदस्य भएकालाई बनाउनुस् न। अनुशासन समितिमा त अलि सिनियर र खारिएको मानिस हुनुपर्‍यो नि। सबैले मान्ने मानिस हुनुपर्‍यो। अनुशासन समितिले पार्टीका पुरै गतिविधि हेर्ने हो। आफ्ना मान्छे राख्न पहिलो पटक केन्द्रीय समितिमा आएकालाई पनि अनुशासन समितिमा राख्ने भन्दैहुनुहन्छ। कस्तो समिति बनाउन खोजेको होला?
सभापतिको अधिकार हो। तर त्यसलाई गलत प्रयोग त गर्न भएन। संवाद भैराखेको छैन पार्टीभित्र अहिले सभापतिको सबभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो।
पार्टीमा गुटहरू हुन्छन्। विपी कोइरालाको बेलामा पनि थिए। विपी, गणेशमानजी, किसुनजी, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय चारजानाको गुट थियो आ-आफ्नो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद, गणेशमान र किसुनजीहरूको गुट थियो। तर उहाँहरू संवाद त गर्नुहुन्थ्यो। सँगै बस्नुहुन्थ्यो, छलफल गर्नुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबु सभापति हुँदा उहाँ थोरै निरंकुश हुनुहुन्थ्यो रे। त्यो म मान्छु। कतिपय कुरामा उहाँ आफ्नो हिसाबले चल्नुहुन्थ्यो । तर कुनै गम्भीर मुद्दा आउदा नेताहरूसँग बसेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो।
अहिले त देशमा यति धेरै मुद्दा छन्। हरेक विषयमा सभापतिले छलफल गरे हुन्छ। तर कुनै पनि विषयमा एकचोटि सभापतिजीले सिनियर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर कसरी जाने? के गर्ने? भनेर छलफल गर्नु भएको छैन। गुटहरूबीचमा संवाद छैन। त्यो राम्रो होइन।
छलफल बोलायो भने सभापतिलाई मात्र दोष दिन्छन्, आलोचना गर्छन्। त्यही भएर नबोलाउनु भएको होला कि?
त्यो होइन नि। उहाँ चुनाव जितेर आएको सभापति हो, हामीले सम्मान गरेका छौं। तर उहाँले सिनियरहरूलाई सम्मान दिएको देख्दिनँ। मलाई दिनुपर्छ भनेको होइन, म त धेरै जुनियर मान्छे हो। तर अरू सिनियर साथीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु पर्दैन? निर्मला पन्तको यत्रो विषय छ। महंगी छ। चिनीको भाउ आकासिएको छ।देश लथालिङ्ग छ। न्यायपालिका निरिह भैसक्यो। यी विषयमा नेपाली कांग्रेसले छलफल गर्नु पर्दैन? केन्द्रीय समिति वा ती साथीहरूको बीचमा छलफल हुनुपर्दैन?
गिरिजाप्रसाद कोइराला निरंकुश भए पनि उहाँले आफूलाई मन नपर्ने मान्छेलाई पनि बिहान बोलाउनुहुन्थ्यो, छलफल गर्नुहुन्थ्यो। अब कसरी जाने सोध्नुहुन्थ्यो। त्यसरी पो विश्वास हुन्छ।
सभापतिले आफ्नो गुटमा त छलफल गरिरहनुभएकै होला नि?
हो, त्यसैले बिगारेको हो।
विधानमार्फत् अझ बलियो सभापति बनाइयो भने आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्न भन्ने नै हो तपाईंको धारणा?
आजसम्म सभापतिलाई जे अधिकार दिएको छ त्यो मनग्गे छ। त्यसको कार्यान्वयन राम्रो तरिकाले गरेको छ कि छैन भन्ने मुख्य विषय हो। मलाई पावर पुगेन, दु:ख दियो भनेर हुन्न। किन दु:ख दियो त?
कहिलै बोलाएर कुरा गर्‍या छ, छलफल गर्‍या छ? छैन। अनि पावर पुगेन भन्ने? हुँदैन। कांग्रेस त को हो भने, सभापति होस् वा अरूसँग जतिसुकै शक्तिसंघर्ष भए पनि संवादका लागि बस्नुपर्‍यो। छलफल गर्नुपर्‍यो।
माथिल्लो तहमा जुन गुट छ त्यो गिरोहमा परिणत भैसक्यो त्यसैले कांग्रेसलाई बिगारेको छ।
फेरि अहिले जसरी संविधानमा क्लस्टर बनाइएको छ। कांग्रेसमा पनि त्यही छ। तर वर्गलाई हामीले बिर्सियौं। श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व कांग्रेसमा भएन। तलदेखि केन्द्रीय तहसम्म श्रमिक, किसानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो। त्यो कसरी बनाउने भनेर छलफल गरौं। पुराना सभापतिहरू छन्, पूर्वसांसदहरू छन्। हामीसँग लड्न सक्दैनन् तर उनीहरूको खाँचो कांग्रेसमा छ। उनीहरूलाई कसरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ल्याउने? अनि पो कांग्रेसको पूर्ण ‘पिक्चर' देखिन्छ। यूवा पुस्तादेखि उमेर भएकोसम्मको आउनुपर्‍यो।
चुनाव हार्नुको एउटा कारण उम्मेदवार चयनमा मनपरी भयो भन्ने छ। त्यसैले संसदीय समिति पुनर्संरचनाको कुरा उठ्यो। निर्वाचनमार्फत् यसको गठन हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। तपाईंलाई के लाग्छ?
म पनि त्यही कुरा गरिरहेको छु। चुनावबाट गर्ने भए पनि ठिक म त्यसविरूद्ध होइन। सभापतिलाई अधिकार दिए पनि ठीक छ। म त्यसविरूद्ध पनि छैन। समितिमा बस्न मापदण्ड तोक्नुपर्‍यो भन्ने हो। यसमा पनि के छ भने सिनियारिटीलाई ख्याल गर्नुपर्‍यो। सभापति त भैहाल्यो। अरू पनि कति वर्ष केन्द्रीय सदस्य भएकोलाई दिने अथवा कसरी दिने भन्ने निश्चित योग्यता बनाउनुपर्‍यो।
अनि अब केन्द्रले सबै काम गर्ने भन्ने होइन। हामी संघीयतामा गइसक्यौं। क्षेत्रले र जिल्लाले पनि दण्ड र पुरस्कार दिनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि अनुशासनको अधिकार दिनुपर्‍यो। टिकट दिने अधिकार जिल्लालाई, क्षेत्रलाई कति दिने हो त्यो निर्णय गरौं। अब तल अधिकार नदिइकन हुँदैन। प्रदेशलाई पनि त्यो अधिकार दिनुपर्‍यो। प्रदेशको टिकट केन्द्रले किन बाँड्ने? उसैलाई बाँड्न दिए भैहाल्यो नि। प्रदेशको संसदीय समिति बनाउने त्यहाँ उसैले टिकट बाँड्ने। प्रदेशलाई पंगु बनाएर केन्द्रलाई बलियो बनाउन सकिन्न। उसलाई पनि अनुशासनमा कारबाही गर्ने अधिकार दिनुपर्‍यो। उसले आफ्नो सीमाभित्र दण्ड र पुरस्कार दिने अधिकार दिनुपर्‍यो।
अहिले उठिरहेको अर्को विषय, केन्द्रीय समितिको आकार पनि रहेछ। केन्द्रीय समिति कत्रो हुनुपर्छ?
१०३, १३३ ,१३५ जनाको केन्द्रीय समितिको कुरा आइरहेको छ। अहिले ८५ जना छौं। मलाई अहिलेकै आकार ठिक लाग्छ। योभन्दा बढाउनु ठिकै छ। किनभने हामीले प्रदेशको संरचना बनाउँदैछौं। सातवटा त्यस्ता संरचना हुन्छन्। ४० जना नै त्यसमा राख्नु भयो भने पनि २ सय ८० जना प्रदेशमा सहभागी हुन्छन्। त्यसैले केन्द्रमा १३३ जना राख्नु भन्दा ८५ जना नै ठिक छ। त्योभन्दा बढी भए केन्द्रको गरिमा घट्छ।
प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो भन्ने हो?
हो। संघीयतामा गएपछि प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्‍यो नि। अहिले त सबै केन्द्रमा नै निर्भर छ।
एकातिर कांग्रेसको सदस्यता वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ। अर्कोतिर कांग्रेसमा साधारण सदस्यतामात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। सदस्यता कस्तो हुनुपर्छ?
यसमा सधैँ विवाद आइरहन्छ। किनभने हामी अधिवेशनको मुखमा क्रियाशील बाँड्छौँ। आफूलाई चुनोस् भन्ने धेय राखेर बाँड्छौं।आफूले जसलाई क्रियाशील सदस्यता दियो, उसैले आफूलाई चुनोस भनेर क्रियाशील सदस्यता बाँडेर अब कांग्रेस चल्दैन। क्रियाशील खुला राखिदिनुपर्छ। जो कांग्रेसमा आउन चाहन्छ आओस् तर अधिवेशनको एकवर्षअघि नै क्रियाशील सदस्यता बाँड्न बन्द गर्नुपर्छ। तीन वर्ष बाँड्दै जानुस अर्को महाधिवेशनमा त उनीहरू खारिन्छन्। विधानमा यस्तो व्यवस्था गरेपछि यसलाई आउँदो हैन अर्को महाधिवेशनबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
अहिले आएका प्रस्तावमध्ये सबै मोडल ठिक छन्। मलाई त सबैलाई कांग्रेसको सदस्यता खुला गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने समाज खुला भइसक्यो। हामी ‘मास बेस’ पार्टी हौं। जुन बेला कांग्रेस जन्म्यो, त्यो बेला अलिअलि कार्यकर्ता बनाउनुपर्छ भनेर क्रियाशील सदस्यताको कुरा आएको हो। अब खुला हुनुपर्छ। आजसम्म चलेको ‘तिमीलाई म क्रियाशील बनाउँछु भोट मलाई देऊ’ भन्ने कुरा गलत हो।
जनतासँग जोडिन त कांग्रेसका नेताहरू समाजमा जानु पर्‍यो नि। हामी वास्तवमा जनताको सुखदु:खमा सामेल नै भएका छैनौं। म गाउँ जाँदा कांग्रेसका साथीहरूलाई भन्ने गर्छु- दिनमा टोलको दुईटा घरमा गएर मान्छेका कुरा सुन्नुहोस्। त्यसले हामीलाई जनतासँग जोड्छ। जनतासँग कांग्रेसको सम्पर्क टुटेको छ, त्यो जोड्नलाई पहिला कांग्रेस जनताको घरमा त जानु त पर्‍यो नि।
साधारण, क्रियाशील, विशेष र सम्मानित सदस्यता भनेर वर्गीकरण गर्ने विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
सम्मानित र विषेश सदस्यमा। विषेश भनेको त्यो पेशा व्यवसायबाट आउने भनेको हो। नेपाली कांग्रेस कन्जरभेटिभ पार्टी हो। कस्तो पार्टी छ भने, म कांग्रेसमा काम गरिरहेको छु। जनताकोमा, कार्यकर्ताकोमा पुगेकै छु। दु:ख गरिरहेको छु तर अहिले पनि के भन्छ भने, यो त डाक्टरबाट आएको भन्छन्। म के चाहन्छु भने, नेपाली कांग्रेसमा माथिबाट पनि छिर्ने ठाँउ दिनुपर्छ। कोही पत्रकार होला, कोही वकिल होला, कोहि डाक्टर नै होला। उनीहरूलाई ‘ल्याटरल इन्ट्री’ दिनुभएन भने कसरी कांग्रेस अघि बढ्छ। कसरी नयाँ मानिसहहरु आउछन्? उनीहरू कांग्रेसको क्याडरसँग त लड्न सक्दैनन् नि।
कांग्रेसलाई सधैँ सहयोग गरेको छ तर जब कांग्रेसभित्र पस्न खोज्दा यो मान्छेलाई रोक्ने काम नेतृत्वबाटै हुन्छ।
यो क्रियाशील र साधारणम धेरै बहस नगरौं भन्ने लाग्छ। क्रियाशील भए पनि ठिक छ, साधारण सदस्यतामात्र भए पनि ठिकै छ। मान्छे सही हुनुपर्‍यो। यहाँ त अहिले नक्कली र गलत मानिस पनि क्रियाशील सदस्य छन्।
सदस्यता कसरी बाँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ?
बाँड्ने सिस्टम त ठिकै छ हाम्रो। क्रियाशील बाँड्दा पनि वडाअध्यक्षको सिफारिस चाहिन्छ तर हाम्रोमा बेइमानी ज्यादा हुने गरेको छ। कांग्रेसको लागि कहिल्यै मद्दत नगरेकोलाई पनि दिने गरेका छौं। अर्को मैले १२औं १३ औं महाधिवेशन देखेँ-अधिवेशन चल्दै छ, काठमाडौंबाट क्रियाशील सदस्यता पठाइराख्या छ। त्यो गलत हो। क्रियाशील त तलैबाट दिनुपर्यो। माथिबाट दिने होइन। बरू हामीले दुई/तिनवटा कुरा गर्न सक्छौं। मतदाता सूचीमा नाम हुनु पर्ने बनाउन सक्छौं।
विधान बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा लापरवाही गर्ने प्रवृत्ति कांग्रेसमा छ। जस्तो, महाधिवेशनको २ महिनामै गर्नुपर्ने विभाग गठन र मनोनयनजस्ता कामहरू भएका छैनन् नि?
यस्तो किन भयो? गुटको राजनीति, गिरोहको राजनीतिले गर्दा भयो। गुट गिरोहमा बदलिएपछि कांग्रेस बिग्रिएको हो।
गुट त पहिले पनि थियो नि। विभाग त बन्थ्यो त। यसअघि सुशील कोइरालालाई शेरबहादुरजीले विभाग बनाउन सक्नुभएन महामन्त्री बनाउन सक्नुभएन भनेर र्‍याखर्‍याख्ती पारेको होइन? आज उहाँले सक्नुभएको छ? बोल्ने अधिकार छ उहाँलाई उहाँका मान्छेलाई?
उहाँहरू नेपाली कांग्रेसको सोचिरहनुभएको छैन। आफ्नो गिरोहका मान्छेलाई कहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोच्नुभएको छ। त्यसरी पार्टी बन्दैन। उहाँ पनि बलियो हुनुहुन्न। नेविसंघ शेरबहादुरजीको मान्छेले जीतेको छ, तर खोइ नेविसंघ? त्यो बलियो छ? आजसम्म केन्द्रीय समिति बस्न सकेको छैन। तरूण दलमा शेरबहादुरजीकै मान्छे छन्। अब त्यो चार जनाले चलाउने? महिला संघमा उहाँकै मान्छे छ। खोइ महिला संघ?
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। पूरा देशका महिलालाई नेपाली कांग्रेसको महिला संघले जुरूक्क उठाउनु पर्थ्यो। खोइ त? दलित संघ, तीन वर्षमा चुनाव हुनु पर्ने ६ वर्ष भैसक्यो भएको छैन, लाजमर्दो होइन? अहिले बहाना बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू मंसिरको महासमिति पनि फागुनमा सार्ने। यसरी पार्टी चल्दैन। पार्टी चलाउन छाती चौडा हुनुपर्‍यो। जबसम्म नेपाली कांग्रेसभित्रका मेरा विरोधी पनि मेरै साथी हुन्, उनीहरूको कुरा पनि मैले सुन्नुपर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा पलाउँदैन तबसम्म नेपाली कांग्रेस अघि बढ्दैन।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज २१, २०७५, २२:१०:००